कृष्ण भगवानको दर्शन गर्दै आज साउन २७ मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
August 11, 2020 1577
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) अध्य’यनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडि छोडेर अग्र पंतिमा आउन सकिनेछ । परिवारका साथ रमाइलो वाता’वरणमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त भएपनि खानपानमा ध्यान नदिदा स्वा’स्थ्य सम्बन्धि समस्या देखापर्न सक्छ ।
मेहनत गर्दा आटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलिले लक्ष्य तथा गन्तब्य पहिल्याउँन सहज हुनेछ । व्याव’साय फस्टाएर भने लगानीको नयाँ वातावरण बन्नेछ भने आम्दानिमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) काम गर्दा कानुनको पालना राम्रोसँग गर्नुहोला राज्यबाट दण्ड तथा जरिवान हुन सक्छ । माया प्रेमको दुरि बढ्ने हुनाले मनमा नरा’माइलो महशुस हुनेछ । यात्रा:को क्रममा रुपैयाँ पैसाको सहि परि’चालन गर्न नसक्दा खर्च बढ्नेछ । यात्राको तय हुनेछ भने विदेशि सामान तथा रुपैयाँ पैसा हातलागी हुने योग रहेको छ । विदेशमा बसेर अध्ययन तथा काम गर्नेह:रुले आजको दिन आफ्नो कामदेखि सन्तुुष्ट हुँनेछन् ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) मनपरेको मानिसबाट चिट्ठा तथा उपाहार पाइने हुँदा मन प्र:फुल्लित हुनेछ । आफन्त तथा अग्रजबाट काममा सहयोग तथा उचित सल्लाह पाईनेछ । तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थ:को व्यवसाय फस्टा’एर जानेछ भने आर्थिक अ:वस्था सुदृढ हुनेछ । पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता प्राप्त हुनेछ । प्रणय सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्नको लागि आफन्तबाट आवश्यक कामहरु हुनेछन् ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) पुराना समस्या’हरु समाधान गरि आम्दानीका स्रोत हरु बढाउन सकिनेछ । सत्रु परास्त हुनेछन् भने आफ्नो क्षेत्रमा वर्चस्व का’यम राख्न सकिने तथा पहुच विस्तार गर्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईँको काममा सहयोग हुनेछ ।
परिवार तथा आफन्तको साथ पाइने हुनाले काम गर्न सहयोग पुग्नेछ । नोकरि तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा देखि’एका चुनौति’हरुलाई चिर्दै गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । पुराना कामहरु सम्पन्न हुने तथा राम्रो कमाई हुने हुँदा थप लगानि बढाउन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) सामा’जिक काम गरि समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरु’लाई खुसी पार्न सकिनेछ । आफ्नो रितिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ भने तिर्थ यात्राको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रसस्त नाफा क’माउने समय रहेको छ । प्रेम प्रशंगमा रमाउन चाहनेहरुका लागि दिन उत्तम रहेकोछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) सम’यको ख्याल नगर्दा वा साना तिना काममा अल्भेर बस्दा महत्वपुर्ण कामहरु था’ति रहनेछन् । बाटो हिड्दा वा सवारि साधन प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला गन्तब्यमा पुग्नु अगावै बिभिन्न सम’स्याहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । लामो समय दखिको माया प्रेममा ब्रेक लाग्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई दैनिकी प्रभावित हुनेछ ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा स’मय दिए पनि भनेजस्तो उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) चलि आएका परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। प्रशंस’कहरू बढ्नेछन्। इच्छाशक्ति बढ्नु’का साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुन सक्छ। विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइने’छ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिलो भएर जानेछन् ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) कुनैपनि प्रतिष्पर्धामा तपाईको नम अग्र स्थानमा आउनेछ । बिछोड भएका आ:फन्त हरुसँग भेट घाटले मन प्रफु’ल्लित हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आय आर्जनका स्रोत’हरु बढ्नेछन् । सरकारि कार्याल:यमा सामान सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने मनग्गे आम्दानि हुनेछ । प्रेममा नजिक हुने योग रहेकोछ । पुराना ऋण तथा रोगबाट छुटकारा पाईने समय रहेकोछ । कुटुम्ब तथा मावली पक्षबाट सहयोग पाईनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) उपहार तथा चिठ्ठा प्राप्तिको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ भने भौतिक सम्प’ति हरु लाभ हुनेछन् । घर परिवारमा नयाँ मानिसको आग’मान हुनेछ भने सन्तान तथा छोराछोरिको प्रगति देख्न पाईने’छ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गर्दा प्रशस्त आम्दानि हुने हुँदा दैनिक कामहरु सहज रुपमा हुनेछन् भने महत्वपुर्ण कामहरु सम्पादन हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्य’ता बढेर जानेछ भने परिवारमा आत्मियत झल्कनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) कुनै काम शुरु गर्नुभन्दा पनि पुरानै कामहरुलाई निरन्तरता दिनु’होला । चाहदा चाहदै पनि घरायसि सुख सुबि’धाहरु प्रयोग गर्न नपा’उँदा मन खिन्न हुनेछ । काम बिग्रने हुँदा राज’किय सम्मान पाउँने योग टरेर जाने तथा राजनीतिमा प्रतिश्पर्धिहरु हावि हुँनेछन् । छातिमा देखिने समस्याका कारण काम गर्न नसकेजस्तो हुनेछ । घर परिवार तथा साथिह’रुबाट टाडिएर परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा असहज महशुस हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) नयाँ काम गरि मनग्गे धन तथा सम्पति जोड्न सकि’नेछ भने उद्योग,व्यापार व्याव’साय फस्टाएर जानेछ । मापा प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पति पत्निबिच एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगा’डि बढ्न सकिनेछ । आट,प’राक्रम गर्न नडाराई अगाडि बढ्ने हो भने चाहेको गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । विवाद तथा हुलमुलका बिच पनि राम्रा तथा परिणाम मुखि काम गर्न सकिनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) अध्य’यन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । आयआर्जनमा वृद्धि हुनेछ । नयाँ कामको थालनी हुनेछ । ठुला व्यक्तिको सहयोग’मा बिशेष काम सम्पन्न हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्ब’सँगको सम्बन्धमा आत्मियता’को बढोत्तरी हुने योग रहेकोछ । बन्द व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिने समय रहेकोछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्त’म रहेकोछ ।
Prevगोंगबु ह’त्या प्रकरणमा चितवनबाट एकजना महिला प:क्राउ
Nextआज कृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदै, यसरी पूजा गर्नुहोस् भगवान कृष्णको !
आज नेपालमा सुनचाँदीको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्…..
कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्दै आज बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
भाउ मिलेपछि किशोरीहरुलाई पुरुष`सँग जिम्मा लगाउने यो ठाउँ (भिडियोसहित)